I-DDoS Ukuhlaselwa - Isazi Semalt Sichaza Indlela Yokuvikela Iseva Yakho
Ukuphepha kweWebhu kube yinkinga ebalulekile kulabo be-webmasters eminyakeni yamuva. Lokhu kuyadingekaekusongweni kokuhlaselwa okuqhutshwa yizigebengu ze-cyber. Esinye sezikhathazo eziyinhloko kuwo wonke ama-webmaster we-Distributed Denial-of-Service(DDoS).
Umphathi wePhasimende Impumelelo i-Semalt ,U-Andrew Dyhan, unikeza ukuqonda okubalulekile kokuhlasela kwe-DDoS ukukusiza ukuthi umise abaduni ukuba banganciphisi iseva.
i-DDoS iyindlela evamile yokuhlaselwa ebhekene nama-webmasters. Ezingeni eliyisisekelo, ukuhlaselwaihlose ukunciphisa isayithi lakho, kodwa likwazi ukulimaza isayithi lakho futhi linikeze izivakashi.
Endabeni yokuhlaselwa kwe-DDoS kukhishwe isicelo sewebhu, isofthiwe itholailayishwe ngokweqile ngabaduni. Ngenxa yalokho, uhlelo lokusebenza alukwazi ukusiza kahle amakhasi ewebhu adingekayo.
Ukucindezela iseva eqhuba uhlelo lokusebenza ukushayeka, ukuhlaselwa kwe-DDoS kuhlose okulandelayo:
Isikhala sediski esinzima
Uhlelo lokuphatha ngaphandle kokusebenza
I-pool yokuxhumeka kwedatha
Ukuhlaselwa kwe-DDoS ngezinhlelo zokusebenza zewebhu kufaka:
1. Ukuqeda ukuxhumeka kwedatha yesicelo ngokudala imibuzo ye-CPU-intensive.
2. Ukuphazamisa isevisi kumuntu noma ohlelweni kubandakanya ukuvimbela umsebenzisi kusukaukufinyelela isayithi ngemizamo yokungena ngemvume engavumelekile eholela ekumiswe kwe-akhawunti.
3. Izinhlelo zokusebenza ze-Flooding ngomzamo wokumisa ithrafikhi evamile ukusuka ekufikeni kusayithi.
Ukuhlaselwa kwe-DDoS kuye kwaba indlela yokuzikhethela kubaduni ngoba cisheakunakwenzeka ukuvikela ngokumelene, ezishibhile ukwenza futhi kuthinte abasebenzisi abaningi. Esikhathini esiningi, zonke izidingo ze-hack professional zinezinsiza ezanelekanye nesisulu esithintekayo sokuthatha isayithi ungaxhunyiwe ku-intanethi.
Lokhu kuhlasela kusebenza kanjani?
Ukuhlaselwa kwe-DDoS kuqala nge-hacker eyodwa noma abaduni abaningi abakha uchungechunge lweamabhodlela. I-hacker iyala i-bots ngayinye ukushayela ithrafikhi endaweni ethize njalo futhi ngesikhathi esifanayo ebeka ngokujwayelekileukucindezelwa kwisiphakeli sesayithi.
Uma amasistimu ebhodlela enenethiwekhi enkulu, ukucindezela kwiseva kungalethaisayithi phansi. Nakuba lokhu kuhlaselwa kungabonakali ulwazi lomuntu siqu uma kuqhathaniswa namanye amasu wokuqhaqhazela, basenayo imbikusebenza ezinkampanini ezincike kakhulu ekufundeni nasekuthengiseni kwe-intanethi. Ukuhlaselwa kwe-DDoS kungabiza ibhizinisi elingaphezu kwama-$ 500,000.
Lokhu kuhlaselwa kunamathuba okulimaza idumela lomkhiqizo nokunikezaumbono ongalungile kubasebenzisi. Lapho kwenziwa abathintekayo bebhizinisi, banikezela abancintisana nabo ukuthi baphumelele ngokuzivumela ukuba basungule,umkhiqizo webhizinisi ohlonishwayo uma kuqhathaniswa nomkhiqizo wakho obonakala unokwethenjelwa. Kwezinye izimo, izigebengu ze-cyber zisongela abaphathi bewebhu ukuthi baqhubekeukuphazamisa izinsizakalo baze bathole imali ethile.
Ngaphezu kwalokho, idatha eqoqiwe kusuka ekuhlaselweni kweDDoS ingasetshenziswa ngabaduni ukuhlaselaiwebhusayithi esikhathini esizayo. Ngokuvamile, ukuhlaselwa okulandelayo kuvele kungenelela futhi kwenzeka lapho abahlaseli beqaphela ukuthi le ndawo isengozini kakhuluokuyinto eyenza kube lula ukuhlaselwa okunzima ngokwengeziwe esikhathini esizayo.
Nakuba ukuhlaselwa kwe-DDoS kunzima ukuvimbela, kungaphathwa kusetshenziswa i-SiteLockuhlelo lokuphepha. Izixazululo ezitholakala ohlelweni lwezokuphepha lwe-SiteLock zikwazi ukuthola nokugcina ithrekhi engadingekile eyenziwebots kusuka ekungeneni kusayithi lakho ngaphandle kokuphazamisa ithrafikhi evamile.
Uhlelo lwezokuphepha lwe-SiteLock luvikela amabhizinisi avela ezinhlobonhlobo ezinonyaukuhlaselwa okubandakanya izinhlobo eziyinkimbinkimbi zokuhlaselwa kweDDoS usebenzisa i-Web Application Protection, i-DNS kanye nokuvikelwa kwengqalasizinda okungcono kakhuluizici ezibalulekile zokuvikela i-DDoS Source .